Semalt: मालवेयरको सिकार बन्नबाट कसरी जोगिने
आजका दिनहरूमा मानिसहरू सोशल मिडिया वेबसाइटहरू, अनलाइन शपिंग सेन्टरहरू र जुवा साइटहरू ठूलो संख्यामा प्रयोग गर्दछन्। यो भन्नु गलत हुनेछैन कि इन्टरनेट सूचनाको एक प्राथमिक स्रोत भएको छ; हामी विभिन्न वेबसाइटहरूमा क्लिक गर्दछौं र नियमित आधारमा हाम्रो मनपर्ने लेखहरू पढ्छौं। करिब दुई वर्ष पहिले, त्यहाँ केवल तीस लाख खराब प्रकारका कोडहरू थिए, र सयौं नयाँहरू हरेक दिन फेला पर्‍यो।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, फ्रान्क Abagnale औंल्याउँछ कि मालवेयर पहिले भन्दा बढी खतरनाक र व्यापक भएको छ किनकि यसले हाम्रो व्यक्तिगत र व्यावसायिक आईडीसँग सम्बन्धित वैध चासोहरूलाई बढावा दिन्छ। इन्टरनेटमा संक्रमित हुने जोखिम पहिले भन्दा बढी छ किनकि सबै डाटा हरेक दिन पुन: प्रयोग भइरहेको छ। मालवेयर र भाइरसको उत्पत्ति अज्ञात छ, तर यो बेवास्ता गर्न सम्भव छ।
मालवेयर भनेको के हो?
मालवेयर सबैभन्दा सामान्य प्रकारको मालिसियस सफ्टवेयर हो; आक्रमणकारीहरूले यो उपकरण कम्प्युटर उपकरणहरू अवरूद्ध गर्नका लागि प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूले संवेदनशील जानकारी स collect्कलन गर्दछ र अनुमति बिना तपाईंको प्रणालीहरूमा पहुँच प्राप्त गर्दछ। भाइरस र गँडो दुई अन्य रूपहरू हुन् जसलाई मालवेयरका साथ भ्रमित गर्नु हुँदैन। यी सबै चीजहरूले बिभिन्न समस्या निम्त्याउँछन् र बिभिन्न किसिमले व्यवहार गर्नुपर्छ।
भाइरस एक स्वयं-नक्कल गरिएको चीज हो जुन तपाइँको कम्प्युटरमा इन्टरनेट मार्फत फैलिन्छ र कोड र कागजातहरूको रूपमा लिन सक्छ। अर्कोतिर गँड्यौला भाइरसभन्दा धेरै फरक छ। गँड्यौलाहरू तपाइँको जानकारी बिना कम्प्युटर नेटवर्क मार्फत प्रचार र गम्भीर समस्याहरूको कारण।
मालवेयर पछाडिको प्रेरणा के हो?
एक ट्रोजन हार्सले कम्प्युटर प्रणालीको ब्याकअप फाईलहरू सेट अप गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई चीजहरूको एक ठूलो संख्यामा पहुँच दिन्छ। वर्षौं पहिले, भाइरसहरू ईन्टरनेटमा ठट्टा र प्रयोगको रूपमा लिइन्थ्यो। धेरै जसो व्यक्तिहरूले यो महसुस गरेनन् कि भाइरसहरू र मालवेयरले उनीहरूको कम्प्युटर प्रणालीमा गम्भीर रूपमा संक्रमित गर्यो। र अब अवस्था पूर्ण रूपले परिवर्तन भएको छ; आजका दिन, साइबर अपराधले मालवेयर ईन्टरनेटमा कमाउन प्रयोग गर्दछ, र व्यक्तिहरू उनीहरू बिरूद्ध कसरी उपायहरू गर्ने भनेर जान्दछन्। ह्याकरहरूले वेबसाइटहरू विकास गर्छन् र विज्ञापनहरू प्रदर्शन गरेर आय उत्पन्न गर्छन्। तिनीहरूले अधिक र अधिक व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न ती विज्ञापनहरूमा विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू र मालवेयरहरू संलग्न गर्दछन्। तिनीहरूले एक कम्प्युटर संक्रमित र सामाजिक सुरक्षा नम्बर, क्रेडिट कार्ड नम्बर, र PayPal आईडी जस्तै तपाईंको व्यक्तिगत डाटा भेला।
म मालवेयर बाट कसरी संक्रमित हुन सक्छु?
यो अफसोसजनक छ कि मालवेयर र भाइरसहरूबाट छुटकारा पाउन कुनै खास वा प्रामाणिक तरीका छैन। शीर्ष-खाच र प्रसिद्ध एन्टिभाइरस सफ्टवेयर र मालवेयर प्रोग्रामहरूले पनि इन्टरनेटमा पर्याप्त सुरक्षा र सुरक्षा प्रदान गर्दैन। यसैले, यदि तपाईको कम्प्युटर प्रणालीमा मालवेयर वा भाइरसको कुनै प्रकार छ भने तपाई सतर्कताहरू प्राप्त गर्न केवल एन्टिभाइरस उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
मालवेयर बाट संक्रमित हुनबाट कसरी जोगिने?
तपाईंले आफ्नो एन्टिभाइरस वा एन्टि-मालवेयर सफ्टवेयर अपडेट राख्नु पर्छ; यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ संक्रमित हुनबाट जोगिनको लागि तिनीहरूको भर्खरको संस्करणहरू स्थापना गर्नुहोस्। तपाईंले इन्टरनेटमा सुरक्षित रहनको लागि विभिन्न एन्टिभाइरस कार्यक्रमहरू र मालवेयर सफ्टवेयरको प्रयोग र हेरचाह पनि गर्नुपर्छ। अनौंठो वेब ट्राफिक र मालिसियस आक्रमणहरूबाट तपाईंको कम्प्युटर प्रणालीहरू बचाउन तपाईं फायरवालहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। स्थान सजगता थप्ने पनि राम्रो छ यदि तपाईं एक मोबाइल उपकरण वा ल्यापटप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ; तपाईंले आफ्नो सुरक्षा सेटिंग्स, ब्राउजर सेटिंग्स, ईमेल सेटिंग्स, र अनलाईन खाताहरू एक चोटि जाँच गर्नुपर्नेछ। इन्टरनेटमा हुँदा तपाईले कडा पासवर्ड प्रयोग गर्नु पर्छ र हरेक हप्ता परिवर्तन गर्नु पर्छ। तपाइँ अनलाइन नभएको बेला तपाईंको कम्प्युटरलाई Wi-Fi बाट विच्छेदन गर्न नबिर्सनुहोस्। कडा सुरक्षा अभ्यासहरू अनुसरण गर्नुहोस् र भाइरस र मालवेयरको जोखिम कम गर्न उपयुक्त उपायहरू लिनुहोस्। राम्रो सुरक्षा अभ्यासहरू अनुसरण गर्नुहोस् र उपयुक्त सावधानीहरू अपनाउनुहोस् जब ईमेल र वेब ब्राउजरहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ जोखिम कम गर्न जुन तपाईंको कार्यहरूले संक्रमण ट्रिगर गर्दछ।